Isikhathi sokufunda: 7 imizuzu Kunezindlela eziningi zokuthuthukisa ukusebenza komkhankaso. Yonke into kusuka kumbala osenkingweni yocingo kuya esenzweni ekuhlolweni kwepulatifomu entsha kungakunika imiphumela engcono. Kepha lokho akusho ukuthi zonke izindlela zokwenza i-UA (Ukutholwa Komsebenzisi) ozosebenza kuzo kufanele ukwenze. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma unezinsizakusebenza ezikhawulelwe. Uma ukuqembu elincane, noma unenkinga yesabelomali noma izingqinamba zesikhathi, leyo mikhawulo izokuvimbela ekuzameni